China Manifold Na eruba mita bọl valvụ na igbapu valvụ emepụta na suppliers |Xinfan
Manifold na valvụ bọọlụ na-asọpụta na mmiri valvụ
Akwụkwọ ikike: afọ 2 Nọmba nlereanya: XF20138B
Ebe amụrụ: Zhejiang, China, Agba: Nickel gbazere
Aha ngwaahịa: manifold na mita eruba, valvụ bọọlụ na valvụ drain
Ụkpụrụ ọrụ nke ihe nkesa mmiri
E nwere mgbe ọtụtụ ndị bịara abịa na-eju na ndụ, na e nwere ihe ndị na-metụtara chiri anya ndụ, dị ka n'ala kpo oku manifold.Water n'ala kpo oku bụkwa a n'ala kpo oku system.One n'ime alaka nke ala kpo oku mmiri separator bụ a isi ngwaọrụ. arụnyere na usoro ikpo ọkụ nke ala iji jikọọ ọkpọkọ isi ọkụ, mmiri na-enye mmiri na pipụ nloghachi.
N'ala kpo oku mmiri separator nwere ike roughly kewara n'ime abụọ dị iche iche akụkụ, mmiri separator na mmiri na-anakọta, dị ka ọrụ nke mmiri ntinye na nloghachi.The ọrụ dịkwa iche iche. The isi anọ ọrụ bụ mgbasawanye, decompression, na stabilization. .Na ntughari, n'ihi na n'ala kpo oku, bụ tumadi izute mkpa nke mmiri ọkọnọ na Transport.If ị nyochaa na-arụ ọrụ ụkpụrụ nke n'ala kpo oku mmiri separator theoretically, ọ pụghị ịchịkwa ime ụlọ okpomọkụ, ma ọ ga-ekwe omume na omume. The n'ala kpo oku. mmiri separator kewara mmiri ọkụ ma ọ bụ uzuoku ezitere site na isi kpo oku ọkpọkọ n'ime ọtụtụ sub-pipes.A diversion echichi nyefere n'ime ụlọ ọ bụla nke gị home.Since n'ala kpo oku manifold na-eji kewaa mmiri eruba, ma ọ bụrụ na ị na-atụgharị na mmiri. na-asọba n'ụzọ zuru ezu, mgbasa ozi ga-agba ọsọ ọsọ, okpomọkụ ime ụlọ ga-adịkwa elu, ma ọ bụrụ na valvụ ọ bụla na-emeghe ọkara, ma ọ bụ otu ọkara, a na-achịkwa valvụ gị nke na-emeghe. mgbasa ozi mmiri na-adị ngwa ngwa, na ọnụ ọgụgụ dị n'ime ụlọ dị n'ime ụlọ dị ala. Ọ bụrụ na a na-agbanyụ mmiri ọkụ ahụ kpamkpam, mmiri ọkụ agaghị agbasa, mgbe ahụ, a gaghị enwe ikpo ọkụ n'ime ụlọ ahụ. Ngwa dị mma nke manifold nwere ike ịhazi ime ụlọ. temperature, ya mere, isi ọrụ nke ikpo ọkụ n'ala bụ ịchịkwa okpomọkụ nke ime ụlọ.
Nke gara aga: Brass manifold na valvụ bọọlụ na-asọpụta mita na valvụ igbapu
Osote: Brass Manifold
Brass Manifold nwere mita eruba na valvụ igbapu
Brass manifold Na eruba mita bọl valvụ na d ...
Ọla kọpa n'ala kpo oku manifold nwere igbapu valvụ a ...